Shina fonosina vita amin'ny fibre laser manamarika milina orinasa sy mpamatsy | Haotian
Masinina fanamarihana laser amin'ny fibre na antsoin'ny sasany hoe laser ho an'ny sokitra, ny marika dia manome marika haingana sy marina ny mpampiasa satria mamela ny fanapahana litera amin'ny haben'ny 0.15mm. Ny laser manamarika amin'ny fibre dia ampiasaina amin'ny marika amin'ny fitaovana metaly rehetra
Ny milina fanamarihana fibre laser mihidy dia natao miaraka amina rafitra mihidy mihidy, izay afaka misoroka tsara ny olombelona tsy ho simban'ny tara-pahazavana sy setroka, tsy misy fandotoana optique sy fahaverezan'ny fametahana herinaratra, ary mitazona ny fahadiovan'ny lohan'ny laser. Ity maodely ity dia miaraka amin'ny laser fibre marika, izay manatsara ny fahombiazana sy ny filaminana. Ny taratra output dia manana kalitao tsara, hafainganam-pandeha ary avo lenta. Mandritra izany fotoana izany dia miaraka amina varavarana manainga ho azy sy rafitra mifantoka izay manatsara ny fiarovana sy ny haitao amin'ny fitaovana ary mahatsapa ny fifantohana sy ny marika haingam-pandeha. Ny mpanjifa dia afaka mamolavola modely namboarina mifanaraka amin'ny filan'izy ireo hahatratrarana vokatra vokatra mahomby kokoa.
Mety amin'ny fanodinana akora metaly sy tsy metaly isan-karazany, indrindra amin'ny fanamarihana ny hamafisan'ny haavony, ny teboka miempo ary ny fitaovana mora vaky.
Ampiharina betsaka amin'ny singa elektronika, fitaovam-pifandraisana, ireo faritra tsy mandeha amin'ny fiara sy môtô, fitaovana sy metatra, aerospace, vokatra ady, fitaovana ary milina, fitaovana fidiovana, fanafody, sakafo sy zava-pisotro, kosmetika, fonosana fanafody, fitaovana ara-pahasalamana, angovo avy amin'ny masoandro, asa-tanana sy ny sisa.
HT-20W 30W 50W 60W 70W 80W 100W mihidy endrika Fibre Laser Fanamarihana Machine
Loha sy solomaso fanaraha-maso avo lenta
Vatan'ny milina laser miorina
Size 800 * 900 * 500mm
Ireo singa lehibe amin'ny milina fanamarihana
Teo aloha: Latabatra famolavolana laser fibre marika
Manaraka: HT-3W 5W 10W UV Laser Manisy marika